Ben’ny Tanànan’i Didy : “Tsy hijanona ny fitrandrahana any Bemainty raha tsy asiam-pandinihana” | NewsMada
Ben’ny Tanànan’i Didy : “Tsy hijanona ny fitrandrahana any Bemainty raha tsy asiam-pandinihana”
« Moa tsy handray andraikitra isika, ndao àry samy hipetraka hitazam-potsiny, tsy mampaninona raha toa tsy mampaninona. Nefa, hoy aho hoe : « Mampaninona, ndeha isika hiaraka hiisalahy. Mbola hisy dinika azo atao ve ? »
Mifono fitakiana io fanontaniana napetraky ny ben’ny Tanànan’i Didy, Radoka Davidson, io na nilaza aza izy fa “tsy namoaka safira intsony i Bemainty hatramin’ny volana janoary », nandritra ny fifampiarahabana nahatrarana ny taona vaovao, nanasan’ny depiote Andriamasimanana Auréline, filohan’ny fikambanana Alaotra-Miray hina, sokajin’olona samihafa.
Nambarany koa fa “vahoaka anetsiny ny any Bemainty. Ny Deba be tsy mamatsy vola intsony. Ny vidim-bary, miakatra… Maro ny fianakaviana miambavy avy lavitra mitonantonana, mitanjozotra milanja vatsy sy baramina ary sivana mankany hatramin’izao! Ny hohanina anefa, tsy misy. Dia hanao ahoana? Ho aiza?”, hoy ity ben’ny Tanàna. Mpanelanelana amin’ny famarotana safira ny ao Atsimontsena, ao an-tampon-tanàn’Ambatondrazaka, manjaka ny tsy fandriampahalemana ao an-toerana sy any Bemainty, Didy, koa ilaina tokoa io fikaonandoha io.
Lazaina fa aorian’ny frankofonia
Ny volana oktobra 2016, notaomin’ireo vahiny aziatika hiverina hitrandraka tsy nahazo alàlana ny olona. « Raha ny henonay tamin’ny fitondram-panjakana : «tsy ho ela fa aorian’ny Frankofonia dia ho avy ny tompon’andraiki-panjakana foibe handray ny andraikiny tsy hamela ny vahoaka hanapotika io ala, harem-bahoaka, io. Kanefa hatraminy isika miteny izao,tsy mbola nisy mihitsy hetsika avy amin’ny fitondrana foibe», hoy ihany ny ben’ny Tanànan’i Didy. Nanambara koa ny Prefe, ary nohamafisin’ny depiote Rabekijàna, ny amin’ny nilazan’ny minisitra Ndahimananjary J. , tamin’izay, fa “miandry vola avy amin’ny Conservation International hoentina manetsika ny mpitandro ny filaminana. Tsy nisy fahatanterahan’izany hatramin’izao. Efa tsy vaovao intsony koa moa ny filazana fa roahina ireo Srilankey, ary asiana sakana etsy sy eroa…
Ny fahapotehin’ilay “faritra arovana” aloha, efa tsy misy fanafodiny fa ifanilihana toy izao hatrany ny andraikitra.